घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू Dusan Tadic बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामले चिनिन्छ "अस्वीकार“। हाम्रो Dusan Tadic बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको सुरुको जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ख्याति अघि जीवन कथा, प्रख्यात कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन शामिल छ।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको आक्रमणकारी मिडफिल्डरको रूपमा आफ्नो रणनीतिक खुफियाको बारेमा। जबकि, केहि थोरैले Dusan Tadic को जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
नेपालका लागि प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
दुसन ताडिकको जन्म नोभेम्बर १ 20 day1988 को २० औं दिनमा आफ्नो आमा, मारिजा ताडिया र बुबा पेटार ताडिया सर्बियाको बाका टोपोलामा भएको थियो। तल उसको प्यारा आमा-बुबाको फोटो छ।
Dusan Tadic का आमा बुबा; पेटार र उनकी प्यारी पत्नी मारिजाले जीवन किसानको रूपमा सुरु गरे र मध्यमवर्गीय पारिवारिक परिवार चलाउन सहज थिए। सर्बियामा जन्मिए पनि दुसनको परिवारका पुर्खाहरू हंगेरीबाट आएका हुन्। आज, हंगेरीका मानिसहरु सर्बियामा बाका टोपलाको आधा भन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा छन्।
बढ्दो, डस्टन कहिल्यै कृषि, वानिकी, माछा, माछा र खननबाट कहिल्यै क्यारियर रोजेन। उनले फुटबललाई आफ्नो भाग्य मार्गको रूपमा देखाए। दुआसनले आफ्नो भाइ र साथीहरूसँग स्थानीय फुटबल खेलेर बाहिर निस्के। एक केटाको रूपमा, उनले मूर्ति बनाए थियरिरी हेनरी र ऊ आर्सेनलको लागि नरम स्थान थियो। स्थानीय मैदानमा बितेको त्यो साँझले लाभांश तिर्नु पर्‍यो किनभने उनी स्थानीय फुटबल टीम टीएससी बाका टोपोलासँग सफल ट्रायल पछि चयन भएकाहरूमध्ये एक थिए।
नेपालका लागि प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
डुवान टाडियाć आफ्नो गृहनगर क्लबको युवा वर्गमा आफ्नो सीपको सम्मान गर्दै हुर्किए AIK Bačka Topola। उसको क्लबमा बाल्यकालको रमाइलो अनुभव थियो र उमेर समूहहरूमा उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी बने।
यो हरेक युवा फुटबलरका लागि ठूलो क्लबमा खेल्ने सपना देख्ने इच्छा थियो र सानो दुसान पनि एउटा अपवाद थिएन। उनको दृढ संकल्पले अर्को युवा टोली, भोजभोडिना द्वारा २०० 2006 मा अधिग्रहण गर्‍यो। भोजभोडिना एक फुटबल क्लब हो जुन नोबिया सदमा रहेको छ, सर्बियाको दोस्रो ठूलो शहर हो र उसको बाका गाउँमा प्रशासनिक केन्द्र हो।
"नोवा सादा एक साँच्चै सुन्दर शहर हो र क्लब साँच्चै राम्रो छ। Iटी सर्बियामा सब भन्दा राम्रो युवा एकेडेमी हो। ” " दुसनले एक पटक भने ...
नेपालका लागि सडकको प्रसिद्धि
दुसनले चाँडै भोजभोडिनाको युवा विकासमा अर्को क्यारियर चरण लिए जुन उनले क्लबसँग एक पेशेवर करार कमाइरहेको देख्यो।
को लागी खेल्दै Vojvodina, उसले राष्ट्रिय र यूरोपीय मान्यता प्राप्त गर्‍यो, विशेष गरी जब एट्लिटिको म्याड्रिड जस्ता शीर्ष उडान टोलीहरूको लागि खेल्दा। यस्तो युरोपेली एक्सपोजरले उनको टोलीमा उनको प्रभाव देखायो। यसका साथै दुसनले २०० team–०2006 र २०० – -१० सत्रमा दुई टर्की सर्बियाली फाइनलमा आफ्नो टीमको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यो उपलब्धिले युरोपेलीबाट उनीहरूको हेर्ने सूचीमा स्काउट्स भेट्यो।
२० वर्षको उमेरमा, २००ustust१० युईएफए यूरोपा लिगमा दुस्टानको पहिलो गोल थियो। त्यो मौसमको अन्त्यमा, उनले आफैंलाई भेट्टाए एफसी ग्रोनिंगन नीदरल्याण्डमा।
नेपालका लागि प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
दुसन नेदरल्यान्ड्समा उत्रने बित्तिकै गोल गर्न सुरु गरेनन्। उनी शाब्दिक सहयोगी राजा थिए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… डुसानले एक पटकको लागि युरोपियन इनाम प्राप्त गर्यो युरोपमा तेस्रो उच्च संख्याको सहायता 2010-11 सीजनमा। उहाँ पछाडि हुनुहुन्थ्यो लिओनेल मेस्सी (25 सहायता) र Mesut Özil (26 सहायता)।
यो मान्यताले उनीहरुमा चासो राख्ने टोलीहरू प्राप्त भयो र २०१२ मा टोएन्टेको स्थानान्तरण भयो। क्लबमा हुँदा दुसन प्रिमियर लिगमा खेल्न उत्सुक भए। बाट आएको पथ देख्दै Theo Walcott, एलेक्स ओक्सलेड-चम्बेर्लेन उनको प्यारो आर्सेनलमा सर्दा उनले साउथेम्प्टन एफसीको लागि छनौटलाई प्रेरित गरे। Tadić रोनाल्ड KOman अन्तर्गत पहिलो जुलाई signing जुलाई २०१ signing मा हस्ताक्षर भए।
विडम्बनात्मक रूपमा, दक्षिणमप्टनको लागि उनको पहिलो लक्ष्य 2014 मा आर्सेनल विरुद्ध विजेता गोल भयो। यो विशेषताले आफ्नो 4-वर्ष अनुबंध हेर्न संगीता संग माध्यमहरु संग जसको प्रशंसक पहिले नै उनको प्रेममा थिए उनीहरु उनको दुसान Tadic म्यान धन्यवाद। तल भिडियो खिच्नुहोस्;
प्रसिद्धिको राष्ट्रिय वृद्धि:
दुई वर्षपछि, दुसान आफ्नो देशमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फुटबल बन्नुभयो र यसले राष्ट्रिय पुरस्कारको नेतृत्व गर्यो (सर्वश्रेष्ठ सर्बिया फुटबलर 2016).
"मेरो लागि महत्वपूर्ण दिन। सम्झनको लागि एक क्षण ", डुनन एक पटक भने उनले आफ्नो साल सर्बिया फुटबलर पुरस्कार प्राप्त गरे।
रेग्लेजन बाट संतहरु बचत गर्दै:
आफ्नो राष्ट्रीय पुरस्कार पक्षमा, दुशान को संतहरु को लागि रेकर्ड ब्रेकर पनि बन्यो जब उनले एक पल्ट प्रीमियर लीग रिकार्ड को लागि जीता एकै मिलानमा सबै भन्दा धेरै सहयोग (4).
दुःखको कुरा आफ्नो अनुबंधको अन्तिम वर्षमा, दुसानले आफूलाई र उनीहरूको टोलीले प्राइम लीगमा क्लब राख्न संघर्ष गर्न देखाए। यो त्यो क्षण थियो कि उहाँले मा योगदान गर्नुभयो केवल प्यान्ट लगाउने यदि एक प्रमुख लेग अवस्थित भयो। अन्तमा, यो भयो। दुर्गान ताडिकले राजनैतिक युद्धको विजय हासिल गरेपछि आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरे।
जुन 2018 मा, दुसान अज्याक्स संग चले जहाँ उनले चमक जारी राख्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
नेपालका लागि सम्बन्ध जीवन
Dusan Tadic ती फुटबलरहरु मध्ये एक हो जसको रोमान्स सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्छ केवल किनभने उसको शुरुको प्रेम जीवन नाटक मुक्त छ। वर्ष २०१us मा दुसानको बिहे उनको प्रिय पत्नी ड्रगाना वूकानाकसँग भयो।
२०१ of सम्ममा, ती दम्पतीलाई तीन बच्चाहरू मिलेर आशीर्वाद दिइएको छ; वसिली, Veljko, र तारा। २०१ 2018 देखी years बर्ष र अझै गणना भइरहेको छ, दुसन र ड्रगानाको विवाह एकदम स्थिर रहेको छ र सम्बन्धविच्छेद वा छुट्टिनुको कुनै अफवाह छैन।
उनको विवाहको रहस्य ड्यागाना वुकनाक लाई धेरै जिम्मेदार छ जसको धेरैले धेरै महिलाको रूपमा वर्णन गरेको छ।
ड्रगाना वूकानाकले आफ्नो श्रीमान दुसनलाई प्रोत्साहित गर्न आफ्नो शक्तिमा सबै गरिरहेकी छिन्। उनी अन्य फुटबलरको WAG जत्तिकै सुन्दर हुन सक्दिनन् तर उनको स्वास्नी उनको मान्छेलाई खुशी पार्दै आएको छ।
डसान निश्चित छ कि कम्तीमा एक बच्चाहरु उनको पछाडिमा पछ्याउनेछ।
नेपालका लागि व्यक्तिगत जीवन
दुसन टेडिकको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले पक्कै पनि तपाईंलाई उसको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरु गरेर, उहाँ सुन्दर हुनुहुन्छ र यसको विशिष्ट छ अल्भारो मोराटा स्पेनिश दृश्य।
ताजिक एक तरिका मा आराम देखि छ कि लगभग हानिकारक छ। उहाँसँग एक पक्कै निधार छ जसले यो सुझाव दिन्छ कि कसैलाई चिन्ता नगर्ने वा आफ्नो मनलाई बर्बाद गर्न पर्याप्त हुँदैन।
फुटबलबाट टाढा, दुसान आफैं नजिकैको बास्केटबल कोर्टमा आफैं नजिकिन्छन्। फुटबलजस्तै, उनले सर्बियाको बास्केटबल लिगको पनि पालना गर्छन्।
एनबीए को बारे मा बोल्दै, दुसान Lakers को एक प्रशंसक हो र उनको पसंदीदा बास्केटबॉलर हो लेब्रोन जेम्स.
नेपालका लागि अनटोल्ड क्यारियर तथ्यहरू
"तपाईंको बच्चाको रगतको पोखरीमा पल्टिएको हेर्नलाई गाह्रो छ।"दुसानको आमा मरिजा घरैमा रुँदै थिईरहेकी थिई, "म उनलाई शान्त गर्न सक्दिन, अन्तमा, उनले आफ्नो डरलाई कम गर्न बेन्सेडिन पनि पिइन"। ताडिकका पिता पिटरले सर्बिया अखबारलाई भने खेलBlic उनको कथनले वेल्सको लेफ्ट-बैक टेलरबाट चुनौती पाएपछि यो भयो।
तल भिडियो बाट देखिए जस्तै, यो एक भयानक क्षण थियो जसले डस्टन ट्राडिक परिवारका सबै सदस्यहरूसँग भय ल्याएको उनको आमाबाबु जो ब्यासा टोपलाले आफ्नो घरमा थिए।
"को सट्टा"जेल सजाय"टेलरले पहेलो कार्ड पाएन, र जो लेडली र Garrett Bale भोकै मुस्कुराउँदै" दुसनका बुबाले भने।
घटनाको लगत्तै लगत्तै, दुसानका बुबा पेटार र उनका केही आफन्तहरू वेल्श फुटबल अधिकारीहरूसँगको प्रदर्शनको लागि कार्डिफको पहिलो हवाई उडानमा बस्न चाहेका थिए र सम्भवतः टेलरलाई कुटे।
वास्तवमा, टेडिकको उपचार गरिए जस्तै उनका चिन्ताहरू उसको नाकमा घाउको पीडा वा रगतको बारेमा थिएन, तर आफ्नी श्रीमती र बच्चाहरूका लागि जुन उनी निरन्तर उनलाई आँसुले हेरिरहिरहेछन्।
खेलमा दुई मिनेट पछि स्थिति पहुँच गर्न बुबाले कल गरेपछि दुसन तडिकका परिवारका सबै दबाब र स्नायुहरू शान्त भए।
- म उसलाई सोध्छु, "तिम्रो नाक कस्तो छ? र उसलाई एक showdown को लागी मेरो योजनाहरु को बारे मा भनें"र मेरो छोराले भन्यो: “जान दिनुहोस् बुबा, वेल्स नआउनुहोस्। मेरो चोट निको हुनेछ। ”
पूर्व सर्बिया कोच मुसलमानले पछि उनको बुबालाई शान्त पारेका थिए कि उनी दुसानलाई पिचबाट टाढा राख्न आग्रह गरे तर उनले इन्कार गरे, उनीहरूको योद्धा छोराले खेल जारी राख्न आग्रह गरे।
"उनले मलाई भने कि मेरो एक छोरा छ जो मैदानमा वास्तविक योद्धा हो।" पेटरले भने।
उनको नामको उच्चारण
के तपाईंलाई थाहा छ?… अ people्ग्रेजी मानिसहरूले उनको पहिलो नाम गलत संतमा बसेको बेलामा गलत उच्चारण गरेका थिए। ट्याडिक आफुबाट चित्त बुझेन। बरु, ऊ प्रायः हाँस्छ र भन्छ, "दुशान"सही नाम उसको नाम भन्नु हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डुसान तान्चिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईंलाई केहि राम्रो लागेन भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीसँग साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं